အရက်နာကျတာကို ဘယ်လိုကုစားရမလဲ.. ? by popolay.com
အရက်နာကျတာကို ဘယ်လိုကုစားရမလဲ.. ?
16 Mar 2020 5,249 Views
အရက်နာကျခြင်းကို ရာနှုန်းပြည့်သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးဆိုသည်မှာ ဘယ်သုတေသနလေ့လာချက်မှာမှ အတိ အကျဖော်ပြထားတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရက်နာကျခြင်းကို သက်သာအောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့..
• ဆီးများများသွားအောင် ရေကို မကြာခဏ များများသောက်ပေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကျန်ရစ်နေတဲ့ Alcohol တွေက ဆီးကနေတစ်ဆင့် စွန့်ထုတ်သွားပါတယ်။ လက်ဖက်သည်လည်း ဆီးသွားစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိအနည်းငယ်ရှိနေတာမို့ တချို့တွေက လက်ဖက်ရည် (ရေနွေးကြမ်း) ကို သောက်ပေးကြလေ့ရှိပါတယ်။
• အစာချေလွယ်တဲ့ ဆန်ပြုတ်လိုမျိုး အစာပျော့ပျော့တွေကို စားပေးပါ။
• အရက်သောက်ခြင်းတွင် ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓါတ်များ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်၍ မောပန်းနွမ်းနယ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင် တတ်သောကြောင့် ချိုချဉ်တဲ့အရသာရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အသီးအနှံဖျော်ရည်များ သောက်သုံးခြင်း (သို့) ရေထဲစိမ်ပြီးသောက်ရတဲ့ ဗီတာမင်ဆေးပြား(ရေဆူဆေးပြား)တွေလိုမျိုးလည်း သောက်သုံးပေးလို့ ရပါတယ်။
• မူးဝေအော့အန်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ ဂျင်းဖျော်ရည်၊ မင့်တီး (Mint tea) သောက်သုံးခြင်းသည်လည်း သက်သာစေပါတယ်။
• ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်စာများဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင်ဘီများ၊ ဗီတာမင်စီ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ အယ်လ်-စစ္စတီအင်း (L-Cysteine) အစရှိတာ သောက်သုံးခြင်းသည်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
• ခေါင်းတွေကိုက်ပြီး ကိုယ်လည်းနည်းနည်းပူတယ်ဆိုရင်တော့ စတီးရွိုက်ဆေးအုပ်စုများမဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးကို သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အခံရောဂါတစ်ခုခုရှိနေရင် (သို့) ဆေးမတည့်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင် မသောက်ခင် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့လူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသောက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
• ကော်ဖီက အရက်နာကျခြင်းကို အထောက်အကူ သိပ်တော့မဖြစ်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်တက်ကြွစေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က အိပ်စက်အနားယူမှု လုံလုံလောက်လောက်မရှိဘဲ အလုပ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ကဖင်းဓါတ်ရဲ့အစွမ်းလေးပြယ်သွားတာနဲ့ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ပို၍ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
• အရက်မသောက်ခင်မှာ ဗိုက်ကိုအစာမရှိဘဲ မနေပါနဲ့၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားရည်စာတစ်ခုခုဖြင့် အစာခံပေးပါ။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗိုက်အစာမရှိရင် မူးလွယ်ပြီး သွေးတွင်းသကြားဓါတ် ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဗိုက်ထဲအစာလေးဝင်အောင် အမြည်းလေးနဲ့သောက်ပါ။
• အရက်ကို တစ်ခါတည်း အများကြီး မသောက်ပါနှင့်၊ အရက်ချည်းပဲသက်သက် မသောက်ပါနှင့်၊ တစ်ခါ သောက်ရင် တခြားသောအရည်များနဲ့ရောပြီး သောက်ပေးပါ။
• အရက်သောက်တဲ့အခါမှာ ဆီးမကြာခဏသွားခြင်းမှ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေကို အစားပြန်ထိုးရန်နှင့် သွေးထဲက Alcohol ပမာဏ သိပ်သည်းဆအရမ်းမများသွားအောင်လည်း အချိန်တစ်နာရီခြားတိုင်းမှာ ရေ ၁-၂ ခွက်ခန့် သောက်ပေးပါ။
• အရက်မသောက်ခင် ဗီတာမင်ပေါင်းစုများ (သို့) အယ်လ်-စစ္စတီအင်း (L-Cysteine) အမိုင်နိုအက်ဆစ် သောက်ပေး ခြင်းသည်လည်း Alcohol ကြောင့် အသည်းရောင်ရမ်းခြင်းကနေ ကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်အပြင် အသည်းကိုလည်း များစွာထိခိုက်မှုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ အသည်းမှာ အဆီတွေစုလာနိုင်ပြီး အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ရုံသာမက အသည်းအား အဆိပ်အတောက်တွေ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ အသည်းခြောက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း သတိဝိရိယလေးနဲ့ သင့်တင့်မျှတရုံသာ ချင့်ချိန်ပြီးသောက်ပါ။ လုံးဝမသောက်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။